थप १० बैंक आरटीजीएस प्रणालीमा आवद्ध
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले थप १० वटा वित्तीय संस्थालाई रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीमा जोडिन अनुमति दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै १० वटा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत आरटिजीएस प्रणालीमा जोडिएको जनाएको हो ।
‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरु आजदेखि आरटीजीएस प्रणालीमा जोडिएका हुन् । यसअघि वाणिज्य बैंकहरु आरटीजीएस प्रणालीमा आवद्ध भइसकेका छन् । अहिले विकास बैंक र वित्त कम्पनी पनि आरटीजीएस प्रणालीमा जोडिएका हुन् ।
के हो त आरटीजीएस प्रणाली?
ठूलो परिमाणमा पैसा निकाल्दा हुने परम्परागत झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्यका लागि चार महिनाअघि देखि कार्यान्वयनमा आएको आरटीजीएस एउटा आधुनिक भुक्तानी प्रणाली हो ।
ठूलो रकम निकाल्न वा स्थानन्तरण गर्नु पर्दा आरटीजीएस प्रणालीको प्रयोग गरे बैंकमा धाएर चेक काटिरहन पर्दैन । अन्य अनलाइन भुक्तानी प्रणालीभन्दा छिटो रकम स्थानान्तरण गर्न वित्तिकै यो प्रणालीमा पैसा सेवाग्राहीको खातामा जम्मा हुन्छ ।
दुई लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको कारोबारका लागि यो प्रणाली उपयुक्त छ । यो प्रणालीमा सरिक हुने सेवाग्राहीले बैंकमा गएर एउटा फारम भर्नुपर्नेछ ।यो प्रणालीको प्रयोग गर्दा शुल्क पनि धेरै नलाग्ने हुँदा यसले पैसा र समय दुवैको बचत गरिदिन्छ ।
आजको विनिमयदर कति ?
अच्युत दाहालको ‘बन्द बाकस’ (कविता)
जनसेनालाई सबैभन्दा दुख दिने ओली हुन्, अहिले गाेहीकाे आँसु चुहाउँदैछन् : डा. बाबुराम भट्टराई
‘कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिबाट नै कोरोना फैलिन सक्छ’
केपी ओलीका नयाँ केन्द्रीय सदस्यले मान्यता पाएनन्
उपेन्द्र यादवलाई कार्यक्रम गर्न नदिने चेतावनी !
महिला लिग फुटबल स्थगित
कृषि विकास बैंकले माग्यो ठुलो सँख्यामा कर्मचारी
नागरिक स्टक डिलरले पायो धितोपत्र व्यापारीको काम गर्न बार्डको अनुमति